Abenzi basechina i-CY-7 (i-aluminium kwendawo yokuhlala) kunye nabathengisi | Jialong
Khathalela ubomi bakho
umbala Igolide yeChampagne, uthuthu lwentsimbi, isilivere yomkhenkce
injongo Ukugcinwa kweempahla
1, Yonke indawo yealuminium ihlala ixesha elide kunye nesinyithi esigcweleyo. Ayoyiki ukubonakaliswa kwexesha elide, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukuguga kunye nokuqhekeka. Ngenxa yokuba indawo ye-aluminium inyangwa ngobushushu obuphezulu kunye nezinye iinkqubo ezizodwa, ayoyiki ukubola kwemvula, umhlwa kunye nesihumba.
I-2, iAluminiyam ingxubevange yezinto ezixineneyo, amandla okuzala awomeleleyo, azinzileyo, ayophuli mpazamo, umthwalo othwala i-15kg, iimpahla ezinzima zijinga ngokukhululeka.
3) Indawo yokuhlala ingasetyenziselwa ukuxhoma iimpahla, iisinqe, iibhulukhwe, iitawuli njalo njalo.
I-4) I-Aluminium alloy eqinileyo, i-5mm yoyilo olomeleleyo, oluzinzileyo, oluzinzileyo, olusondeleyo kunye nomzimba ophambili we-hanger, umthamo oqinileyo wokuthwala, ungakhululi.
5, umaleko kabini ejingayo pole, uyilo multi-functional.
I-6, i-20mm ebanzi yomzimba wesakhelo, egudileyo ngaphandle kwe-burr, eyomeleleyo, eyomeleleyo yokuthwala amandla, akukho lula ukuyilungisa.
I-7, 28mm yoyilo loyilo lwe-arc, yonyusa umphezulu woqhakamshelwano ngeempahla, ukunciphisa ngokufanelekileyo amanqaku owomileyo, agudileyo ngaphandle kwamanqaku.
Imveliso: Sinale mveliso ilungileyo, zonke izixhobo zithunyelwa ngaphandle, kukho ulawulo olukhethekileyo, ulawulo olungqongqo lwenkqubo nganye yemveliso, ukuqinisekisa umgangatho weemveliso.
Packaging kunye nokuthuthwa:Indawo nganye yethu ixhonywe ngokuzimeleyo ukuthintela amaqhuma ngexesha lokuhamba ngokuchaphazela iimveliso. Umyalelo wethu omncinci ngamaqhekeza angama-340, oko kukuthi, ityala elinye.
Gcina: Ngenxa yokuba iihanger zethu zenziwe ngealuminium alloy, aboyiki ubushushu obuphezulu kwaye abuyi kuba nomhlwa, ke xa kufuneka sizisebenzise yonke imihla, kufuneka sizosule ngetawuli eqhelekileyo.
Emva kwentengiso:Singaqinisekisa ukuba iimveliso zethu zinereyithi yokupasa eyi-99%. Ukuba unamagqabantshintshi okanye iingcebiso kwiimveliso zethu, ungaqhagamshelana nathi ngqo nge-imeyile, kwaye siza kuphinda sizikhuphele zona xa kuziswa okulandelayo.
Egqithileyo I-CY-8 (indawo yangasese)
Okulandelayo: CY-6 (Aluminium kwendawo yokuhlala)